မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင် - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင်
Posted by ukkmaung on July 9, 2012 at 12:52pm
(၁) မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင်
(၂) အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ချင်လို့ ၊ ပြောစရာလူမရှိလို့ ၊ ပျင်းလို့ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်.......မသိသေးလို့ စမ်းကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်..... စက်ရုပ်နဲ
အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောလို့ရပါတယ်... Online မှာ သူငယ်ချင်းတွေမလာလို့၊ ပျင်းပြီးစကားပြောစရာ မှရှိရင်.....စက်ရုပ်နဲ စကားပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဟာသတွေကိုပြောတတ်သလို ကိုယ် မနေ့ ကသူနဲ့စကားပြောခဲ့ရင် နောက်နေ့သူကို ပြန်မေးရင် သူကသိနေတယ်.. တော်တော် ကိုပျော်စရာကောင်းပြီး အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်....
ပျော်စရာကောင်းပြီး၊ ဟာသတွေ တွေ့နေရင်လဲ ပြန်ပြီး comment လေးပေးခဲ့ပါ... သူတို့ ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ mouse ကိုတင်ပြီးရွေ့ရင်လဲ လိုက်ကြည့်တက်ပါတယ်.... ပြောနေတာကြာပါတယ်.....လက်တွေ့အောက်က လင့်လေးမှာသွားကြည့်နော်..
http://www.rong-chang.com/tutor.htm (စက်ရုပ်ကိုကိုနဲ့ ပြောချင်ရင်)
http://showcase.pandorabots.com/pandora/talkbot?subid=b33bd02e7e345cdb (စက်ရုပ်မမနဲ့ ပြောချင်ရင်)
ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက စက်ရုပ်မမကနဲနဲ အိုက်တင်ခံတယ် ပဲများတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူကသူပွင့်ချင်တဲ့အချိန်မှပွင့်တာဗျ။ တော်ရုံနဲ့ ဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူး။
(၄) အင်္ဂလိပ်စာ ကို Online ကနေ သင်ကြားပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး Website ၁၀ ခု လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုက်လေး တွေပါ။
( 1 ) www.nonstopenglish.com
ဒီ website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နံပါတ် ( ၁ ) website ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website မှာ အသုံးပြုသူ user တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ English Grammer and Vocabulary Skill တွေကို Interactive Tests တွေနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Register လုပ်ပြီး user log in နဲ့ ၀င်မယ် ဆိုရင်လည်း သူ့ဆီက အခမဲ့ Email Test တွေ ရယူဖြေဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ရမှတ်ကိုလည်း ပြန်လည် ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ ဒီ website က သူ့ရဲ့ Test တွေကို အပတ်စဉ် update လုပ်ပေးပါတယ်။
(2) www.englishclub.com
သူကတော့ ဒုတိယ အကောင်းဆုံး Learning English Website ပါ။ ဒီ website မှာတော့ လူငယ်တွေ လွတ်လပ်စွာ English သင်ကြားတဲ့ပုံစံကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကဗျာလေးတွေ ၊ စာလေးတွေကို website ပေါ်မှာ ပြန်ပြီး upload လုပ်လို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် ( comment ) တွေကိုလည်း Website ပေါ်မှာ ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းပြဿနာ တွေကိုလည်း အခမဲ့ Email နဲ့ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါသေးတယ်။
(3) www.freeenglish.com
ဒီ website မှာတော့အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေ ၊ English နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ E Books တွေကို download ရယူနိုင်ပါတယ်။
(4) www.rong-chang.com
ဒီ Website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို Second Language အဖြစ် လေ့လာတဲ့ သူတွေ အတွက် အထူးလွှင့်တင်ထားတဲ့ Website ပါ။ အထူးသဖြင့် English ဘာသာ mother language မဟုတ်တဲ့ လေ့လာသူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံ ထဲက ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ရွေးချယ်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
(5) www.englishathome.com
ဒီ Website မှာတော့ Grammer, Vocabulary, Verbs and Speaking Games တွေနဲ့ English Newsletter ( သတင်းလွှာ ) တွေကို အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
(6) www.nylanguageexchnage.com
ဒီ Website ကတော့ နာမည် အတိုင်း မတူညီတဲ့ ဘာသာစကား နှစ်ခုကို မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက် သင်ယူတဲ့ နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာ - ပြင်သစ်စကား သင်နေတဲ့ English Speaker တစ်ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား သင်နေတဲ့ French Speaker တစ်ယောက် အပြန်အလှန် သင်ကြားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
(7) www.roseofyork.co.uk
ဒီ Website ကိုတော့ The Rose Of York English College က လွှင့်တင်ထားတာပါ။ ဒီ site မှာ user တွေ အနေနဲ့ General English, Business English, Academic English, English Speaking စတာတွေကို အခမဲ့ သင်ကြားလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။
( 8 ) www.expertenglish.com
ဒီ Site မှာတော့ user တွေ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ( participate ) နိုင်တဲ့ program တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ - One Stop English Perfection Program မျိုးတွေနဲ့ပါ။
(9) www.worldenglish.com
ဒီ Website ကတော့ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း မှာ ရှိတဲ့ English ဘာသာ လေ့လာသူတွေ အနေနဲ့ Highest Quality English Language Resources တွေကို ရ ရှိနိုင်ကြဖို့လွှင့်တင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က မျက်စိမှုန်သူများနဲ့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေ အတွက်ပါ လေ့လာနိုင်ဖို့ Font Size အကြီး အသေးကို အဆင့် ၄ ဆင့် အထိ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က စာလုံးသေးသေးလေးတွေကို ဖတ်ရတာ စိတ်ပျက်နေသူများအတွက် အထူးသင့်လျော် ပါတယ်။
( 10 ) www.learnenglish.org.uk
ဒီ Website မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြု Quotes တွေ၊ Films တွေ၊ Music Files တွေကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ကြပါတယ်။
Permalink Reply by Jane Wood on June 23, 2021 at 6:12am
People want to get results in one night there is no shortcut if you really want to becomeamaster in anything. A deep dive is required to makeaname of yourself in it asafob copy new york store owner did in the fob industry. There are many other examples.